Mahatezitra ireo Malaoita ny Hevitry ny Bilaogera Iray momba ny “Nsima” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2019 14:30 GMT
Niteraka adihevitra momba ny halehiben'ny fahafahana mety hananan'ny olona iray amin'ny fanehoany hevitra anaty bilaogy ny lahatsoratra iray vao haingana momba ny foto-tsakafon'i Malawi, dia ny nsima izany. Nasehon'ireo fanehoankevitra sasany izay saika avy amin'ireo mpamaky avy ao Malawi avokoa fa ilaina ihany ny famerana ny tena, sy ny fandraisana andraikitra ary ny fahatsapan-tena indrindra raha manoratra momba an-javatra iray raisin'ny hafa ho sarobidy aminy ianao.
Io adihevitra mafana nitohy tanatin'ireo bilaogy Malaoita sy ireo sehatra fiadian-kevitra sasany io dia vokatry ny lahatsoratra navoakan'ny bilaogy sahaninà vehivavy Eoropeana iray izay namaritany ny foto-tsakafon'i Malawi, nsima, ho “sakafo maharikoriko sy tsy misy dikany indrindra anatin'ny tantaran'izao tontolo izao.”
Fantatra fotsiny amin'ny anarana hoe MissJenn-Malawi ary miasa ao Mulanje (Malawi) izy, nahazo fanehoankevitra am-polony izy rehefa hitanà bilaogera Malaoita roa ny lahatsorany ary navoaka tao amin'ny Nyasa Times.
Efa nofafany io bilaogy io, ilay lahatsoratra tany am-piandohana kosa nadikan'i Cryton Chikoko. Nandritra izay, maherin'ny 70 ireo tsikera voarakitra, ny sasany tamin'ireo nangataka ny fandroaha-monina azy avy hatrany.
Maro ireo bilaogera naneho hevitra tamin'ity tantara ity na dia tsy nanoratra momba izany tao amin'ny bilaoginy manokana aza. Milaza i Joe Mlenga:
Tsoriko aloha fa maharikoriko ilay votoaty…saingy deraiko kosa ny famoahana ity lahatsoratra ity.
Nilaza ilay vehivavy bilaogera Leah Gondwe:
Manontany tena aho raha ao tsara ity vehivavy ity any ho any…noheveriny fa tsy ho hitantsika Malaoita ve ilay lahatsoratra? Tsy misy iraharahiako izay fananany ny heviny manokana any… manantena aho fa hihazona azy FARAN'IZAY HAINGANA ny mpitandro filaminana alohan'ny hanapatapahanay Malaoita tezitra ny taolany, satria mipoitra ao amin'ny bilaoginy ny toeran'ny tranony sy ny laharan'ny findainy.
Raha nilaza kosa i Sunga:
Heveriko fa tsy tokony hamely ny famoahana ilay lahatsoratra isika. Ny mazava dia tsy zakany tsara ny dona amin'ny fihinanana ny nsima miaraka amin'ny osy. Efa nitety firenena vitsivitsy tao amin'ny tanibe aho ary niharan'ny dona ara-kolontsaina vitsivitsy kanefa tsy naneho hevitra toa azy. Misy fomba tsara kokoa hanaovana izany nefa ahafahana mampita tsara ny hafatra. Ambany dia ambany ny salanisa azony eo amin'ny fandanjàko ny fahaiza-miresaka.
Nasehon'ireo fanehoankevitry ny Malaoita manoloana ity lahatsoratra momba ny nsima ity koa fa mila mampihatra fahaiza-mifehy tena ireo Malaoita sasany satria toa mihoatra ny fanehoany tsotra ny heviny momba ity sakafo maha-te ho tia ity ny sasany amin'ireo tsikera. Izao no fampitandreman'ity mpanoratra ity ao amin'ny bilaoginy ndagha izay nanoratany ny fandinihany momba ilay tantara:
Azo lazaina ho manafintohina mitovy amin'ilay mpanoratra ihany koa ireo tsikera sasany nataon'ireo Malaoita. Raha toa ka tena tohina tokoa ireo Malaoita, rariny kokoa ny fanehoana izany aminà fomba matotra kokoa satria mahatonga ny olona tsy hahay hanavaka ilay bilaogera sy ireo mpitsikera fotsiny ny fanaovana toy ireo fanehoankevitra sasany.
Ny marina dia tena nisy tamin'ireo tsikera nampiseho fa nahita irika hamoahana ny hatezerany amin'ny azungu fotsiny ny olona, raha toa ka tokony niakitra fotsiny ny rikorikonareo manoloana ny fomba fanoratany. Azoko antoka fa rariny ny fitenenana fa “tohina tamin'ny nosoratanareo aho” ankoatra ny fanevatevàna ilay mpanoratra. Zavatra roa tsy mitovy ny filazàna ny fihetsehamponao momba ny zavatra iray sy ny famelezana olona.
Vita avy amin'ny koba katsaka, koba mangahazo, sns ny Nsima, fantatra amin'ny anarana maro anatin'ny ankamaroan'ireo firenena any Atsimon'i Sahara, ary hanina amin-kafaliana.
Tsy voalohany izao ireo mpitsidika an'i Malawi indrindra ireo avy any Eoropa sy Etazonia no manoratra bilaogy momba ireo fomba fiaina sy kolontsaina izay manohina ireo Malaoita sasany. Tsy vitan'ny nampiseho ny famakian'ny Malaoita tsikelikely ny bilaogin'ny hafa ireo fanehoankevitra ireo fa koa nampirisika ny sasany hamorona ny azy manokana sy haneho ny heviny.